श्रीमती साटफेर गर्दै चलाउने ! – Jagaran Nepal
श्रीमती साटफेर गर्दै चलाउने !
विश्वमा अनौठा अनौठा घटना सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो समय जसलाई कलियुग भन्ने गरिन्छ । हाम्रो समाजले सोच्नै नसक्नेगरी यहाँका दम्पत्तिले श्रीमती साट फेर गरेर चलाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । आफ्नी श्रीमतीलाई अर्को परिचत पुरुषसँग पठाउने र परिचित पुरुषकी श्रीमती वा गर्लफेण्डलाई आफुले भोगचलन गर्ने गरेको घटना समाचारमार्फत बाहिर आएको हो ।
घटना छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको हो । उत्तर प्रदेशबाट श्रीमती सीता (नाम परिवर्तन)लाई दिल्ली लगेर श्रीमान हरि (नाम परिवर्तन) ले आफ्ना साथी अमर (नाम परिवर्तन) लाई चलाउन सुम्पिए भने साथीकी गर्लफ्रेण्ड निशा (नाम परिवर्तन) सँग आफू रमाए ।